Xa ukhuphiswano lungafumaneki malunga nokutya kuphela
Ukukhuphisana kokutya kubonisa kwiTV kunokunandipha umdlalo ngamanye amaxesha kwaye kubenokubangela ingxabano. Yiloo nto kwimeko yesihlanu "Masterchef" . Kubafazi abaninzi (kunye namadoda) ababukela umbukiso, ukudumala kwafika njengoko beza kwiNkundla yeRayre Lapresi.
Kwabanye abantu, iNkundla ye-Courtney yayingayithandi ukususela ekuhambeni kwakhe kwinqanaba. Umngeni ngomngeni, ukukhungatheka kwakhula kwaze kwaba yinto yekota ezintathu zokugqibela.
Ngaba ukutya kwakhe kwakungcono kunabanye? Okanye, ngaba kukho enye into eyenzekayo?
INkundla yeNkundla kwiSatifikethi seNyaka
Ingxaki kunye neNkundla ye-Courtney yayingekona ukupheka kwayo, kwakuyimo yakhe sengqondo eyayiyinkathazo. Nangona kwakukho amacebo kulo lonke ixesha, kwakubonakala kuninzi kwisiqephu sokugqibela.
Ngokuchasene nabadlali ababini abaneqhinga (uLeslie Gilliams no-Elizabeth Cauvel) kwixesha lokugqibela, i-Courtney yahlutha xa i-Leslie yongeza ityuwa eninzi kwisidlo kwaye yapheliswa ekukhuphiswano lokugqibela . Wayemhlekisa ngemvana ye-Elizabeth. Sekunjalo, xa wayinambitha i-dessert yakhe kwaye waqonda ukuba wayengenayo okwaneleyo ukubeka ijaji, wayenomuvo wokuba uthethelelwe.
Ngokuqinisekileyo, ukutya kweNkundla yeeNkundla kungabonakalisa . Kodwa, kwakunzima ukungaqapheli ukunyaniseka ngexesha lexesha lesihlanu. Ngokuqinisekileyo, ngelixa ngamanye amaxesha lalibukeka lugqwesileyo, ukutya kwakhe kwakusoloko kwakubonkqisayo.
Ukuthatha isibheno sakhe sokugqibela, umzekelo.
Kwakuyi-trifecta yezinto eziyingozi: indlebe yengulube enomsindo kunye ne-dandelion kunye ne-saladi ye-fennel eyayinamaqanda. Indlebe yengulube, ngokwenene? Asinakuvumela ukuba izinja zethu zidle ezo.
Yayibukeka ngathi loo nto yayiza kuqala kwiphepha. Kodwa hayi, bawuthanda ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. UJoe-owayenomdla weNkundla ye-Courtney ukususela ngosuku olubizwa ngokuba yi-salad indlebe yesaladi "isigxina" kunye "neengcamango."
Kulo lonke isiphelo, wayengumchasi wakhe, imenyu kaElizabeth Cauvel eyayibonakala ihlakaniphile kwaye imnandi. Emva kokuba ioli yeoli kunye needrafruit ikhekhe yafumana iziqwenga, kwakubonakala sengathi wayeqinisekile ukuphumelela.
Emva kokulinda okukhulu ukubona ukuba ngubani oza kuphumelela (ngexesha lika-Elizabeti umyeni wakhe wafa), abagwebi bathi yiyona nkcazelo encinane kunazo zonke ezahlula abafazi ababini.
Ngaba Kukho Iimpawu Ezivela Ekuqaleni?
Xa iCrown yathweswa umqhele, ndandiziva ndidimazekile. Sekunjalo, inkxalabo enkulu kukuba mhlawumbi enye yezo nkcukacha zincinci yayingekho iinqanawa eziqhekezayo, kwakungenxa yeesithende ezi-6 intshi.
I-Courtney yayibonisa ukuba nomdla wemveliso ngokukhawuleza. Kwimbonakalo ethanda ukuthatha i-backstories ekhutshwe ngokomzwelo kumncintiswano, akunakwenzeka.
Amehlo akhe amakhulu kunye nokuphulaphula ilizwi lomntwana elijoliswe kwiikhamera kunye nabagwebi banokuphazamisa. Nangona kunjalo, abaninzi ababukeli (ikakhulukazi abasetyhini) baqaphela intombazana yentombazana kunye nentloko yamehlo e-Courtney ejoliswe kwabanye abathintelayo.
Bathi, njengokungakwazi kwakhe ukudala abahlobo basetyhini kumbukiso, babenombhobho ebomvu kum. Kodwa xa amadoda ejikelezile, kwacaca ukuba iNkundla yoluhlobo lwaluhlobo oluthile lentombazana; uhlobo olukwazi ukusebenzela indoda.
Ukutya okanye Isibheno seSondo?
Inkundla yayiphefumlelwe kwaye i-flirty kunye nabagwebi kwaye yayipheka ngeesithende ezintandathu. Ngesinye isikhathi wacela uxolo ngenxa yokuba ngumqwenguli, njengentombazana efuna ukusindiswa ngumkhonto kwisibambiso esikhanyayo.
Musa ukungahambi kakuhle. Andinanto echasene nabaphangi. Into endiyithandayo yindlela ayithinte ngayo, "Ndenze iimpazamo" ngelixa ndizenza ngathi luhlobo olumnandi, intombazana engenamntu ongeke athathe iingubo zakhe ngemali.
Amawaka amabhinqa (kunye namadoda) enza umsebenzi wesondo. Kuhle kwaye abantu kufuneka benze imali; Umsebenzi wesondo uba ngumsebenzi ohlawula kakuhle kwaye ngamanye amaxesha kuyimfuneko. Akukho kugweba loo nto, kodwa abaninzi abantu abasebenza kule mi sebenzi banayo kwaye bayabhikisha esidlangalaleni ngokuchasene nomsebenzi wocalulo .
Kwi-Masterchef, iNkundla ye-Courtney ichaze umsebenzi wakhe ngokuthi "ukudansa kwangaphakathi" nangona i-intanethi igcwele izithombe zayo kwintambo ye-g kuphela.
Kungenxa yokuba ukudansa kwendiza kuzwakala ngathi u-acrobat ne-Cirque du Soleil. Awuyikukhupha imifanekiso yeClub yaseGellar's Gentlemen kunye neSakhokho (iqumrhu laseFiladelphia apho i-Courtney isebenze kwaye iphumelele uMgcini-zincwadi weNyaka ka-2013).
Enyanisweni, iNkundla yayiya kuthandwa ukususela ekuqaleni ukuba wayenengqungquthela (ewe, ndade ngudlala kwiqela lomfana), ndibe nomnini (kwaye ndingaziqhenkceli kodwa ndayithanda imali), kwaye ndayigcina isondo sakhe apho kwiqela. Le nto yayiyinto enye ayifuni ukuba ifakwe kwiikiti "Masterchef".
Ngubani opheka kwiintloko zeetandathu?
Zingaphi izihlandlo athetha ngayo ibinzana elithi "Andiyintombazana nje ezintendeni ezithandathu"? Kuba ngubani onxibe izithende ezintandathu? Ngokuqinisekileyo kungekhona umcuphi (okanye inkosi).
Kwaye ndicinga ukuba abagwebi (bonke abantu, bakucabangisise) kunye nabavelisi (ababenokuba bonke abantu, abaqinisekanga) bonke baphendule ngokwenene ngesini sakhe. Ngoko, kwakunzima ukwazi ukuba ngaba uya kuba yijaji ayithandayo ukutya kwakhe okanye ezinye izizathu ezingabonakaliyo.
Ngezo zizathu, ukubukela iNkundla inokuwina "Masterchef" ezintlanu zazingenelisekanga kum.
Yiba ngumqhubi kwi-'Ixabiso lilungile '
Imizekelo yeeNkcazo zoMqondiso kwiGrama kunye noBumbe
Ngaba Uyazi Amagama EeKlabhu Zadala zeGalofu?
Delphi Thread Pool Isibonelo usebenzisa i-AsyncCalls
Ungalungiselela njani i-Reiki Attunement yakho
UDanielle Steel Ukhutshwa Kutsha
Indlela yokudlala i-Free Bet Blackjack